သကျတနျ့ခြို: May 2013
တချို့လူတွေက လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ အာဏာကိုဗန်းပြပြီး ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ professional ပိုင်းမှာ ၀င်စွက်ဖက်တာတွေရှိတယ်
တချို့လူတွေက စိန်နားကပ်ရောင်နဲ့ ပါးပြောင်တာကို မက်မောနေကြတာတွေရှိတယ်
တချို့လူတွေက ကိုယ်က ဘာမှမသိ ဘာမှမတတ်ပေမယ့် လူတွင်ကျယ်လုပ်ရတာကို ၀ါသနာပါသူတွေရှိတယ်
တချို့လူတွေက ကိုယ်အောင်မြင်ဖို့အရေးသူတပါးကို နင်းတက်ရတာလည်း ၀န်မလေးတတ်ကြဘူး
တချို့လူတွေက အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေလို့ နှိုးရခက်တယ် အသိခေါက်ခက် အ၀င်နက်ကြတယ်
- အသက်ကြီးလာတိုင်းလူကြီးလို့ သတ်မှတ်လို့မရဘူး လက်အောက်ငယ်သားအပေါ် ရင်နဲ့မခြားစောင့်ရှောက်နိုင်မှ လူကြီးလို့ခေါ်တယ်
- အထက်အမြင့်တစ်နေရာမှာနေတိုင်းလူကြီးလို့ သတ်မှတ်လို့မရဘူး တာဝန်ယူနိုင်မှုအပိုင်းနဲ့ ကျောသားရင်သားမခွဲခြားပဲ ကလေးကလားအပြုအမူတွေမလုပ်မှ လူကြီးလို့ခေါ်တယ်
- လူကြီးဆိုပြီး နေရာတကာ နှိပ်ကွပ် လို့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတစ်ခုတည်းရှေ့တန်းတင်နေတာ လူကြီးလို့မခေါ်ဘူး လူငယ်လို့ခေါ်တဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေစကား ကို လေးလေးစားစားနားထောင်ပေးနိုင်မှ လူကြီးလို့ခေါ်တယ်
- လူကြီးဆိုပြီး ဘ၀င်လေဟပ် လို့ ငါခိုင်းတာလုပ် ငါ့သဘောအတိုင်းလုပ်ရမယ်လို့ ထင်နေတဲ့သူတွေကိုလူကြီးလို့မခေါ်ဘူး လူကြီးပီသစွာနဲ့ လူငယ်တွေနဲ့ နွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံမှုရှိမှသာ လူကြီးလို့ခေါ်တယ်
- လူကြီးဆိုပြီး တစ်သွေးတစ်သံတစ်မိန့် လို့ သတ်မှတ်တာဟာ အာဏာရှင်ပဲ ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ရှုမြင်သုံးသပ်ပေးနိုင်မှသာ လူကြီးလို့ခေါ်တယ် ။
အခက်အခဲနဲ့ကြုံရတဲ့အခါ ခေါင်းမပူပဲ အေးအေးစဉ်းစားမှသာ အဖြေမှန်ကိုရမယ်
မနက်ဖြန်အတွက်ပဲမကြည့်ပါနဲ့ သဘက်ခါ ကိုပါကြိုတွေးပါ
တခါတလေ လက်လွှတ်လိုက်ရတဲ့အရာတွေက ပိုကောင်းမယ့်အရာတွေရောက်လာစေဖို့ မှတ်ပါ
လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ်မို့ တခါတလေ မတူညီတဲ့အခြေအနေတွေကြုံလာရင် မှန်တဲ့ဖက်ကိုလိုက်ရမယ်
ဒီနေ့ ၂၄ နာရီကုန်ဆုံးသွားခဲ့ရင် မနက်ဖြန် ၂၄ နာရီမှာ ကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေမလာဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်လဲ
( သက်တန့်ချို )
Posted by သက်တန့်ချို at 12:48 PM 11 comments:
Labels: Facebook ပေါ်မှ စာစုများ
မိုးအေးအေးနဲ့ ဒီနေ့ အကြောင်းအရာအချို့ကိုတွေးမိတယ် ။ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့အရာတွေကိုပါ ..
အော် .ဖြစ်ချင်လိုက်တာ ..ဆေးကျောင်းဝင်ဖို့အရေး ကြိုးစားလိုက်ကြတာ
လူတွေဘာလို့ ဆရာဝန်ဘ၀ကို ဒီလောက်လိုချင်နေကြလဲ မသိ ..ကျုပ်ကတော့ နည်းနည်းမှ မလိုချင်တာအမှန်ပဲ
ငယ်ဘ၀ကတည်းကဖြစ်ချင်တာက လေယာဉ်ပိုင်းလော့သို့မဟုတ် သင်္ဘောကပ္ပတိန် . .
အခုတော့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဘ၀ . . ကျုပ်စဉ်းစားကြည့်တယ်
ရုပ်ရှင်တွေ ဗွီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာဆိုရင် မင်းသမီးနဲ့မင်းသား ရှိတယ်ဆိုပါတော့
မင်းသမီးကို အိမ်ကသဘောတူတဲ့လူတွေက များသောအားဖြင့်ဆရာဝန်တွေဖြစ်နေတတ်တယ်
ပြီးတော့ အဲဒီကောင်တွေက ဗီလိန်တွေဖြစ်ဖြစ်သွားရော မင်းသားက နောက်ဆုံး မိဘသဘောတူထားတဲ့ ဗီလိန်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးမင်းသမီးကို ရရသွားတဲ့ ဇာတ်ထုပ်တွေများတယ်
ကဲ ဆရာဝန်ဆို ရွံ့ရှာစရာကြီးဘာများကောင်းလို့တုန်း
စင်ကာပူထွက်သွားတာ အခု အိမ်ကိုတစ်လ ၁၅ သိန်း သိန်း ၂၀ လောက်ပြန်ပို့နိုင်သတဲ့
ကျုပ်လား မပြောချင်ပေါင်ဗျာ ဆရာဝန်ဆိုရင် လူတွေကဘာလို့များ တိုက်နဲ့တာနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကားကြီးစီးပြီး ဆေးခန်းကိုလာ
ကျုပ်နဲ့သိတဲ့ဆရာဝန်တွေ အများစုကတော့ သူလိုကိုယ်လိုပါပဲ ဘာတိုက်နဲ့တာနဲ့မှမရှိ တချို့ဆိုနယ်ကနေလာတက်ရတာဆိုတော့
ပိုတောင်ချို့တဲ့ရှာသေး . . ကျုပ်တို့လည်းဆေးကျောင်းတက်တုန်းကဘဲဥချဉ်ရည်ဟင်းလေး အသုပ်စုံလေး ထမင်းချိုင့်ထဲထည့်ထည့်သွားရတာပါပဲ
ဘာကြောင့်များ လူတွေကဆရာဝန်ဆိုရင် သိပ်ချမ်းသာပြီး အားလုံးပြည့်စုံတဲ့လူလို့ထင်နေကြသလဲဆိုတာကို အံ့သြမိတာ
ကြည့် ... အကောင်းပြောခံရလား . . ဆိုတော့ ဘယ်ကလာ အကောင်းပြောခံရမှာတုန်း
ဆရာဝန်ဖေ့ဘုတ်သုံးတော့ အတော်အချိန်အားနေတယ်ဟုတ်လား ဖေ့ဘုတ်မှာချည်းပဲဆိုပြီး ပြောတဲ့သူတွေကရှိသေး
ဆေးခန်းထိုင်တယ်ဆိုတာက တချို့က တနေကုန်ထိုင်ပေမယ့် တချို့က ဂျီပီချိန်လို့ခေါ်တဲ့ ညနေမှထိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်
ဥပမာ ကျုပ်တို့လိုပေါ့ .. ဒီတော့ကာ . .ကျုပ်တို့က ညနေဆေးခန်းချိန်မတိုင်ခင်မှာ တခြားအလုပ်တွေလည်းလုပ်ရသဗျ
အင်တာနက်ကလည်းဝါသနာပါတော့ သုံးသဗျ စာကလည်းရေးချင်တဲ့ပိုးက ထကြွနေတော့ကာ ဖေ့ဘုတ်မှာလည်း ရေးသဗျ
ဒီတော့လည်းအပြောခံရတာပေါ့ဗျာ ..ကဲ ဘာများ ကောင်းလို့တုန်း ဆရာဝန်ဘ၀က
၀က်ဖြစ်မှတော့မစင်မကြောက်နဲ့လို့ကျုပ်ဆရာတစ်ယောက်ပြောတာကြားဖူးတယ် . .. ကျုပ်ကတော့ အဲ့စကားကြားပြီးကးတည်းက
ဘာမှကို မရွံ့ရှာတတ် မကြောက်တတ်တော့တာ စဉ်းစားကြည့်ဗျာ ဆရာဝန်ဆိုတာ ဒုတိယနှစ်ကတည်းက လူသေကောင်တွေကိုင်ရတွယ်ရ ..
ပြီးတော့ အော် ချစ်သူနယ်မြေ တက္ကသိုလ်ဆိုတာ ကျုပ်တို့ အဖို့တော့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစာအုပ်နဲ့ မျက်နှာနဲ့မခွာ .. ကျုတိုရီ့ရယ် test တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့
ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တာပဲ ဒီလောက်တော့ရင်းရမှာပေါ့ ..လို့ ပြောကြမှာပေါ့ ..အေးဗျာ သဘောပြောပြတာပါ ဒါတွေကလည်းကျုပ်ကျော်ဖြတ်ပြီးပါပြီ
ဆေးရုံဆင်းတော့လည်း ကိုင်လိုက်ရတဲ့ အညစ်အကြေးနဲ့သွေးတွေ OG ဆိုပိုဆိုးသေး ကျုပ်တို့မှာ မရွံနိုင်ရှာ ဒါပေမယ့်ကျုပ်ဝန်ခံချင်တာတစ်ခုတော့ရှိသဗျ
ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဓါတ်တိတိပပ ပေါ်လာတာ ဟာ ဆေးရုံမှာ အလုပ်သင်ဆင်းမှ ပေါ်လာတာ ..
အရင်ကတော့ ဒီလောက်ကြီး ပြင်းပြင်းပြပြ မဖြစ်ဖူးဘူး ..
လူနာတွေနဲ့ထိတွေ့ရတယ် အော်... သနားဖို့ကောင်းလိုက်တာ .. အဖိုးအိုတွေအဖွားအိုတွေ ညည်းညူနေရှာတာ ..
ကျုပ်တို့ဆေးထိုးပေးလိုက်ရင်သူတို့ခမျာ သက်သာသွားတာ .. ဒီတော့လည်းကျုပ်တို့မှာ နေ့မအား ညမအား လူနာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရသပေါ့ ..
ဆရာဝန်တွေအားလုံးရဲ့အကြောင်းကိုတော့ကျုပ် တိတိကျကျမသိပါဘူးဗျာ ..အဲ ..ကျုပ် ခံယူထားသလောက်တော့ကတော့
ကျုပ်လည်း အရမ်းကြီး ၀ါသနာအပါကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်ဟာ ဒီဘွဲ့ကိုယူထားပြီးပြီ ဒီလမ်းကိုလျှောက်နေပြီဆိုမှတော့ smart ကျကျလေး အလုပ်ကို လုပ်ချင်တာပါပဲ
ဒီနေရာမှာ လူနာတွေရဲ့အသက်နဲ့ သက်ဆိုင်နေတော့ကာကျုပ်တို့ဟာ ခေတ်နဲ့အမှီ ဆေးဝါးတွေကိုလည်းအမြဲလေ့လာနေရသေးတယ်
အိုဗျာ ..သူများတွေ ညဖက်ဂစ်တာတီးပြီးသီချင်းဆိုချိန် ဘောလုံးပွဲကြည့်ချိန် ဘီယာဆိုင်ထိုင်ချိန် ကျုပ်တို့လား ... ဂျီပီမှာ လူနာတွေနဲ့ အဲဒါတွေအကုန်လုံးလက်လွှတ်လိုက်ရသဗျာ
ဟင် ..ဆရာဝန်ပဲ ဒါတွေ မက်နေရသလား ..လူနာပဲကုပေါ့ လို့ပြောဦးမယ် ..
အေးဗျ ဆရာဝန်ပါပဲ ဒါပေမယ့် ကျုပ်တို့လည်းတခြားသူတွေလို အသက်၃၀ အောက်လူငယ်တွေပဲဆိုတော့ကာ ..
တခါတခါတော့လည်း လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ သာမန်လူငယ်တစ်ယောက်ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းချင်တာတော့အမှန်ပဲဗျ ..
ကျုပ်ဆေးခန်းထိုင်ရင်းခဏခဏ စဉ်းစာမိတယ် ..
အော်.. အိမ်ရှေ့က အုတ်ခုံလေးမှာ ဂစ်တာ တီးရင်ကောင်းမှာပဲ ..အခုချိန် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မိုးအေးအေး ညဖက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးမှာ လူငယ်သဘာဝ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာနေရရင်ကောင်းမှာပဲ စသဖြင့်ပေါ့လေ ..
ဆိုတော့ကာ ..ကျုပ်တို့ဟာ အားလုံးကို ဆုံးရှုံးနေရတဲ့ ကောင်တွေပါ
ဘာမှ လည်းအထင်ကြီးစရာမရှိ ..ဘာမှလည်းမက်မောစရာမရှိ
လူနာကို လူလို့မြင်တဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့တော့ကျုပ်အမြဲကြိုးစားတယ်
လူနာကို ဆေးကုရင် ကိုယ့်မိဘလို့သဘောထားကုလို့ ကျုပ်ဆရာတစ်ယောက်ပြောဖူးတယ် .. သူတို့ကိုပေးမယ့်ဆေး ကို ကိုယ်ဆိုရင်ရောသောက်မှာလားလို့ အမြဲတွေးပါတဲ့ မှန်လိုက်တာ ..
ကျုပ်လား ..အရမ်းကြီးတော့မချမ်းသာချင်ပါဘူးဗျာ ..ဘ၀ဆိုတာကလည်း ချမ်းသာ ကြွယ်ဝ နေလို့ကော စိတ်ချမ်းသာနေရတဲ့အရာမှမဟုတ်တာ ..
ကျုပ်စားဖို့သောက်ဖို့လှူဖို့တန်းဖို့ လောက်လေးရနေရင်ပဲ မဆိုးပါဘူး
လူနာတွေ...ဟာ သိပ်သနားဖို့ကောင်းတယ် .. ဆေးခန်းတစ်ခါပြရဖို့အရေးကို သူတို့ရောဂါကို ကြိတ်မှိတ်ခံစားပြီး ပိုက်ဆံပြည့်တဲ့အချိန်အထိစောင့်
ငွေလေး ထောင့်ငါးရာ နှစ်ထောင်လောက်ရှိမှ ဆေးခန်းကိုရောက်လာကြတယ် .. တကယ်တော့ ဆေးဝါးတွေရဲ့တန်ဖိုးကို သိနေတဲ့ကျုပ်အဖို့တော့
မတန်တဆကြီးယူဖို့ဆိုတာ တော်တော့်ကို မသတီစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါ ..ကျုပ် အဖို့ တခြား စီးပွားရေးနဲ့သာ ချမ်းသာအောင်လုပ်ချင်လုပ်မယ် ဆရာဝန်အလုပ်နဲ့တော့ တစ်သက်လုံးချမ်းသာအောင်မလုပ်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားသဗျ
ကျုပ်ဟာ ရည်မှန်းချက်သိပ်ကြီးကြီးမားမားလည်းမရှိပါဘူး အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေလုပ်ပြီး (ကျုပ်မကြိုးစားချင်တာ အပျင်းကြီးတာလို့စွပ်စွဲချင်လည်းလွတ်လပ်စွာစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်လေ ) လူနာသီးသန့်တွေ့ဆုံကုရတာထက်
အခြေခံလူတန်းစားတွေနဲ့ နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့ရတဲ့ ဂျီပီ ဘ၀ကိုပဲ ကျုပ်မက်မောသဗျ ..
ကျုပ်ဟာ professional ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူး .. ဒါပေမယ့်ကျုပ်အမြဲတွေးနေမိတာက ဆရာဝန်ဘ၀ဟာ ကျုပ်တို့ငယ်ငယ်က ကြားနေသလို မြင်နေရသလို ဘာမှ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ဘ၀ကြီးလည်းမဟုတ်ပါလားလို့ ..
တခါတခါတော့လည်း ကိုယ်ဟာ ဒီဘွဲ့ကြီးကိုင်ထားပြီးမှ တခြား စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာကိုယ့်ထက်အောင်မြင်ချမ်းသာတာတွေတွေ့ရတော့ အားကျမိတာတော့အမှန်ပါပဲ ..
အော် ...ဆရာဝန်..ဆရာဝန် ...
လူနာနဲ့ ရင်းနှီးစွာ အားကိုးယုံကြည်မှုရတဲ့ဘ၀ကလွဲလို့
ဘာများ ကောင်းလို့လည်းဗျာ ..။
မိုးအေးအေးနဲ့ အတွေးများသွားတယ် ။
၂၆ မေ ၂၀၁၃
Posted by သက်တန့်ချို at 12:16 PM4comments:
ကဲ . . ဆေးစက်တွေကို ကျဲချင်သလို ကျဲ ချလိုက်စမ်းကွဲ့
ကျရာ ဇာတ်ရုပ်မှာ ပီပြင်အောင်သာ သရုပ်ဆောင်ကြရအောင် . .
လှိုင်းလား လေ လား
လျှောက် . .
လျှောက် . . . ရဲရဲသာ ဆက်လျှောက်ကြရအောင်ကွဲ့
ဘ၀ဆိုတာ ခြေခင်းလက်ခင်းသာတဲ့ ပန်းဥယျာဉ်တော့မဟုတ်ခဲ့
အားလုံး ထက်မသာရင်တောင် . .
အားလုံးထက် လူပီသရမယ် တဲ့ . .။
ဘ၀ဆိုတာ ဖျက်ကနဲလင်းခွင့်ရတဲ့ မီးစာတစ်ခုများလား
ငါတို့ အလိုက်အထိုက် စီးမျောကြရအောင် ..။
Photo : ဒီဇိုင်နာ နဂါး
Posted by သက်တန့်ချို at 12:10 PM 1 comment:
တစ်ခါတုန်းက ရွာလေးတစ်ရွာမှာ သစ်ခုတ်သမားတစ်ဦးရှိပါတယ် ။ သူဟာေ န့တိုင်းတောထဲကိုသွားပြီး ထင်းတွေခုတ်လို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုတယ် ။ တစ်နေ့တော့ သစ်ခုတ်သမားဟာ တောထဲဝင်လာရင်း မျက်စိလည်လမ်းမှားလို့ အတွင်းပိုင်းကိုရောက်သွားခဲ့တယ် ။ အဲဒီရောက်သွားရင်း သစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာ ဒါဏ်ရာရပြီး ပြုတ်ကျနေတဲ့ငှက်တစ်ကောင်ကို တွေ့ခဲ့တယ် ။
ငှက်ကလေးဟာ တစ်ကိုယ်လုံး ငွေမှင်ရောင်ဖြစ်နေတဲ့အပြင် တဖိတ်ဖိတ်တောက်ပနေလျှက်ရှိတယ် ။ ထင်းခုတ်သမားက “ တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ဒီလိုလှပတဲ့ငှက်မျိုးမတွေ့ဖူးဘူး အိမ်ကို ဆေးကုဖို့ သယ်ပြီးမွေးထားရမယ် ” လို့တွေးပြီး ငှက်ကလေးကိုအိမ်ကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ် ။ အိမ်ရောက်လို့ ငွေရောင်ငှက်ကလေးကို ဆေးကုသပေးနေတဲ့အချိန်မှာ ငှက်ကလေးက နေ့စဉ် သစ်ခုတ်သမားကို သီချင်းဆိုဆိုပြပါတယ် ။ သာယာနာပျော်ဖွယ်ကောင်းလွန်းလှတာကြောင့် သစ်ခုတ်သမားဟာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေခဲ့ရတယ် ။
တစ်နေ့တော့ သစ်ခုတ်သမားရဲ့ အိမ်နီးနားချင်းကငွေရောင်ငှက်ကလေးကိုမြင်တော့ပြောတယ် ။
“ ဒီငွေရောင် ငှက်ထက်လှတဲ့ရွှေရောင်ငှက်ကလေးကို တောနက်တစ်နေရာမှာတွေ့ဖူးပါတယ် အသံကလည်းပိုချိုပြီးသာယာနာပျော်ဖွယ်ကောင်းပါတယ် ” သစ်ခုတ်သမားဟာ အိမ်နီးနားချင်းရဲ့ ပြောတာကိုကြားပြီး ရွှေရောင်ငှက်ဆိုတာလည်းရှိပါသေးလားလို့တွေးမိလိုက်တယ် ။ ဒီတော့ အဲဒီရွှေရောင်ငှက်ကလေးကိုမြင်ချင်စိတ်ပြင်းပြလာခဲ့တယ် ။
ငွေရောင်ငှက်ကလေးဆိုပြတဲ့သီချင်းသံတွေကိုလည်းအရင်လို နားမထောင်ဖြစ်တော့ပဲ ရွှေရောင်ငှက်ကလေးကိုတမ်းတရင်းပဲအချိန်ကုန်နေခဲ့ရတယ် ။ နေ့တိုင်းလည်း မျက်နှာမသာမယာနဲ့မပျော်ရွှင်တော့ပါဘူး ။ တစ်နေ့တော့ ညနေခင်းအချိန်မို့ နေ၀င်ဆည်းဆာအချိန်ကလှပနေခဲ့တယ် ။ သစ်ခုတ်သမားက အင်း . . ရွှေရောင်ငှက်ကလေးသာဆို ဒီလို နေ၀င်ချိန် နေရောင်အောက်မှာ အရမ်းလှမှာပဲလို့တွေးနေမိတယ် ။ ဒါဏ်ရာပျောက်ကင်းစပြုနေပြီဖြစ်တဲ့ငွေရောင်ငှက်ကလေးက အိမ်ကနေထွက်ခွာဖို့အတွက် သစ်ခုတ်သမားဆီသွားပြီး နောက်ဆုံးအကြိမ် အဖြစ် သီချင်းဆိုပြခဲ့တယ် ။
သီချင်းသံပြီးတော့သစ်ခုတ်သမားကပြောတယ် “ ငွေရောင်ငှက်ကလေးရဲ့အသံကကောင်းပေမယ့် ရွှေရောင်ငှက်ကိုတော့မှီမှာမဟုတ်ပါဘူး အမွှေးအတောင်တွေကလှပေမယ့်ရွှေရောင်ငှက်လောက်တော့လှမှာမဟုတ်ပါဘူး ” လို့ပြောလိုက်တယ် ။ ငှက်ကလေးက ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ သစ်ခုတ်သမားကို ၃ ကြိမ်လှည့်ပတ်ပျံသန်းပြီးနေ၀င်တဲ့အနောက်အရပ်ဆီပျံသန်းသွားပါတယ် ။
ငွေရောင်ငှက်ကလေးပျံသန်းတာကိုကြည့်နေရင်း သစ်ခုတ်သမားဟာ ရုတ်တရတ် သူ တသသဖြစ်နေရတဲ့ အိပ်မက်ထဲကရွှေရောင်ငှက်ကလေးဖြစ်နေတာကို အံ့သြစွာတွေ့လိုက်ရတယ် ။ သူအမြဲတောင့်တနေရတဲ့ရွှေရောင်ငှက်ကလေးဟာ သူ့ဘေးမှာ အစဉ်အမြဲရှိနေခဲ့တာကို သူမသိခဲ့ဘူး ။ ငှက်ကလေးကတော့ အနောက်အရပ်ဆီပျံသန်းပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ ။ တကယ်တော့ငွေရောင်ငှက်ကလေးဟာ ဒါဏ်ရာအနာတရဖြစ်နေချိန်မှာ အရောင်ဖျော့ပြီး ငွေရောင်ပြောင်းနေခြင်းဖြစ်ပြီး နေပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါ နေရောင်အောက်ထွက်လိုက်တဲ့အခါ မူလ ရွှေရောင်ငှက်ကလေးအဖြစ်ပြန်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ် ။
ကိုယ့်အနားမှာရှိတဲ့ အဖိုးတန်တဲ့အရာတွေဟာ တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ထင်နေတာလား
ဒါဆိုသင်ဟာ သစ်ခုတ်သမားလို အတွေးမျိုးဝင်နေတဲ့သူပါပဲ
ကိုယ့်အနားမှာရှိနေတဲ့အရာတစ်ခု အဝေးရောက်သွားမှ နှမျောတသမဖြစ်ပါစေနဲ့
ကိုယ့်အိပ်မက်ထဲက အရာက လက်တွေ့မှာထက်ပိုသာနေတယ်လို့လည်းမတွေးထင်ပါနဲ့
တကယ်တော့ သစ်ခုတ်သမားလို အိပ်မက်ထဲကအရာကဘေးမှာရှိနေတဲ့အရာထက်ပိုသာတယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်နေပါလိမ့်မယ်
ကိုယ့်အနားမှာရှိတဲ့ . . .
မိဘ ဆွေမျိုး ၊ ချစ်သူ ၊ လင်ယောက်ျား ၊ မိန်းမ ၊ မိတ်ဆွေကောင်းတို့ကို တန်ဖိုးထားပါ
အမေကျော်ပြီးဒွေးတော်လွမ်းတာဟာ အနားမှာ တန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာကို သတိမထားမိပဲ ဆုံးရှုံးသွားမှ နောင်တရတတ်တာမျိုးပါ
လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အနားမှာရှိတဲ့အရာတွေကို တန်ဖိုးထား နိုင်ကြပါစေ ။
A Golden Bird အား ဘာသာပြန်သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 1:01 PM 1 comment:
မင်းတို့ငါတို့ စိတ်တွေသာ မလွတ်လပ်သေးကြတာ
ကျိန်စာမိနေတဲ့ ကျမ်းပုရပိုဒ်ကို ငါတို့အတူရွတ်ဆိုခဲ့ကြ
အခုထိတော့ စစ်ပွဲတွေက မသေကြသေးဘူး
ဒေါ်စုကို သမ္မတမဖြစ်ထိုက်ဘူးလို့ပြောတာ သူစိတ်မဆိုးဘူး
မင်းတို့ငါတို့မျက်နှာတွေပေါ်က မျက်နှာဖုံးတွေ ချွတ်ထားလိုက်ကြ ။
ငှက်ဖျားမိလို့ သေသွားတဲ့ စစ်သားတွေမင်းသိလား
မင်းဟာ တကယ်တော့ ဘုတ်အုပ်ကြီးပဲစိုးကြီး
အဲဒါမင်းတို့ငါတို့လို လူတွေ ပဲ
နိုင်ငံခြားက ဒေါ်လာတွေက အပျိုရည်ကို ၀ယ်ယူလို့ရသလားကွ
နိုင်ငံခြားကဒေါ်လာတွေက ဂုဏ်သိက္ခာကို ၀ယ်ယူလို့ရသလားကွ
နိုင်ငံခြားက ဒေါ်လာတွေက မျက်နှာဖုံးတွေ ၀ယ်ယူလို့ရသလားကွ
တို့ဟာ ကိုယ့်လှေကိုယ်ထိုး ပဲခူးရောက်ရောက်
တို့ဟာ ဆင်ကန်းတောတိုး တဇောက်ကန်းကောင်တွေ
ငါတို့ပြည်ပျက်တော့မယ်ပြောတဲ့ ပါးစပ်တွေလိုက်ပိတ်ကွာ စိုးကြီး
ခြဆိုတာ စားလို့ရသမျှ အကုန်စားတယ်စိုးကြီး
မင်းတို့ငါတို့ အရူးလုပ်ခံရတဲ့ သိန်း လေးဆယ်တန်တွေ
အခု ပွင့်သွားပြီ စိုးကြီး
မင်းတို့ငါတို့ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် မအော်ရဲတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်နာမည်
ငါတို့ဟာ သူခိုးပြေးမှ ထိုးကွင်းပြတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး
မင်းတို့ငါတို့ တိုင်းပြည်မှာ မီးအချိန်ပြည့်မလာဘူး ( မှန်တယ် )
မင်းတို့ ငါတို့တိုင်းပြည်မှာ မိုးပျံတံတားကြီးတွေမရှိဘူး (မှန်တယ် )
မင်တို့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာ မိုးနည်းနည်းရွာတာနဲ့ရေတွေဝပ်တယ် ( မှန်တယ် )
မင်းတို့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာ တယ်လီဖုန်းပြောဆိုခတွေဈေးကြီးတယ် ( မှန်တယ် )
မြန်မာပြည်မှာ ရိုးသားတဲ့ အပြုံးတွေရှိတယ်
သမ္မတ ခေါင်းထဲမှာ ဘာတွေးနေလဲ မင်းမြင်လား
ငါတို့ . . ငါတို့တွေ ဘာဆက်ဖြစ်ကြမလဲ မင်းသိလား
Posted by သက်တန့်ချို at 2:16 PM3comments:
တစ်ခါတုန်းက တောအုပ်လေးတစ်အုပ်တွင် မျောက်လေးတစ်ကောင်နေထိုင်သည် ။ ထိုမျောက်လေးသည် စိတ်လည်းအလွန်တိုတက်ကာ ဘယ်အရာကိုမှ ရှည်ရှည်မတွေးတတ်ပဲ ပြီးစလွယ်နေထိုင်သည် ။
တစ်နေ့တွင် မျောက်ကလေးသည် တောအုပ်အစပ်အနီးသို့မယောင်မလည်နှင့်ရောက်ရှိလာပြီးလယ်သမားတစ်ဦး၏ ခြံနားသို့ချဉ်းကပ်လာမိသည် ။ မျောက်ကားဤသို့စဉ်းစား၏ ။
“ အင်း လယ်သမားရဲ့ အိမ်ဘေးက တောင်းထဲက ပဲစေ့တွေဟာ ကြီးမားပြီး စားချင်စဖွယ်ဖြစ်တယ် ငါလယ်သမား ကိုင်းထဲသွားနေတုန်းသွားခိုးယူရင်တော့ လယ်သမားမသိတန်ရာဘူး ” ဆိုပြီး လယ်သမားအိမ်နားကိုချဉ်းကပ်သွားတော့တယ် ။
ပြီးတော့ စဉ်းစားဥာဏ်မရှိတဲ့မျောက်ကလေးဟာ ပဲစေ့တွေကို တစ်ခုခုနဲ့ထည့်ယူဖို့မစဉ်းစားပဲ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ယူလာခဲ့တဲ့အတွက် နည်းနည်းပဲယူလာနိုင်ခဲ့တယ် ။ ဒီလိုနဲ့ပြန်လာတဲ့လမ်းတလျောက်မှာ ပြေးရင်းလွှားရင်းနဲ့လက်ကြားထဲကပဲစေ့တစ်စေ့ကထွက်ကျသွားခဲ့တယ် ။
ဒီတော့ မျောက်ဟာ အဲဒီထွက်ကျသွားတဲ့ ပဲစေ့တစ်စေ့ကိုလိုက်ကောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ လက်ထဲကပဲစေ့ အစေ့ ၂၀ လောက်ထွက်ကျသွားပြန်တယ် ။ ဒီလိုနဲ့ကျသွားတဲ့ပဲစေ့တွေလိုက်ကောက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်လက်ထဲကဆုပ်ထားတဲ့ပဲစေ့တွေထွက်ကျလိုက်နဲ့ ချာချာလည်နေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ မျောက်ဟာ စိတ်တိုပြီးလက်ထဲရှိသမျှ ပဲစေ့တွေအကုန်ပစ်ချပြီး လက်ဗလာနဲ့ပဲ တောထဲပြန်ဝင်သွားခဲ့ပါတော့တယ် ။
ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေကို အသုံးမချပဲ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတစ်ခုအတွက် နှမျောတသ လိုက်လံဆယ်ယူနေတုန်းလက်ရှိအခွင့်အရေးတွေပါ ထပ်မံဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ် ။
လက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုပဲ တန်ဖိုးထားပါ ကိုယ်နဲ့ထိုက်သလောက်တော့ကိုယ်ရမှာပါပဲ
အကုန်လုံးကိုတော့သင်ဖမ်းဆုပ်ထားလို့မရနိုင်ပါဘူး အချို့သောအရာတွေလွတ်ကျပါစေ . . .
ဒါပေမယ့် . . ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတော့ လွတ်ကျသွားတဲ့တချို့သောအရာတွေအတွက် ထပ်မံအဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့ ။
A monkey with the peas အား ဆီလျော်သလိုဘာသာပြန်သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 2:40 PM 1 comment:
အနောက်တောင်မှာ မိုးတောင်စွေနေပါရော့လား ... ။
ဘယ်လိုတွယ်ငြိချိတ်ဆက်ခဲ့ပုံတွေ စတဲ့ ... ။
ပြိုကျလာတဲ့ကောင်းကင်မှာ ဆန္ဒတွေက လှောင်တယ်
အိပ်မက်တွေက တာရှည်ခံပစ္စည်းတွေမှမဟုတ်ပဲ ... ။
ရေခိုးရေငွေ့တို့ချိတ်တွဲ . .
အလဲအကွဲ ယစ်မူးနေလိုက်ပုံ .. ။
ဘ၀ဆိုတာ သာသာယာယာပါပဲ တဲ့
အာရုံငါးပါးဟာ တိမ်စိုင်တွေ လို ...။
Posted by သက်တန့်ချို at 2:35 PM 1 comment:
တစ်ခါတုန်းကပေါ့ ဘုရားသခင်က လူသားမိန်းမကို ဖန်ဆင်းနေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်း ၆ ရက်မြောက်နေ့မှာ နတ်သမီးတစ်ပါးရောက်လာပါတယ် ။ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်ကိုမေးတယ်
“ ဒီတစ်ခုလေးကို ဘုရားသခင်က ဘာလို့အချိန်အများကြီးယူပြီး ဖန်ဆင်းနေရတာလဲ ”
“ အခုဖန်တီးနေတဲ့ လူသားမိန်းမရဲ့ အစိတ်ပိုင်းတွေကို တွေ့လား ”
နတ်သမီးက ဖန်တီးလက်စ လူသားမိန်းမကို သေသေချာချာကြည့်လိုက်တယ်
သူဖန်တီးပြီးဖြစ်တဲ့ လူသားမိန်းမရဲ့ လက်နှစ်ချေင်းကို ညွှန်ပြလိုက်ပြီး
“ ဒီလက်နှစ်ချောင်းနဲ့ သူမဟာ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေကို လျှော်ဖွပ်နိုင်တယ် အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်း အမျိုး ၂၀၀ လောက်ကိုလည်း ဟိုရွှေ့ဒီရွေ့ပြောင်းနိုင်တယ် အရသာ ထူးကဲတဲ့အစားအသောက်တွေကိုလည်း ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ် ဒါ့အပြင် ကလေးငယ်တွေကိုလည်းချီမပြုစုပေးနိုင်သေးတယ် အဲဒီလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပဲ ဒူးနာတာကအစ လူတစ်ဖက်သား အသည်းကွဲတာ အဆုံး သူ ပျောက်ကင်းအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ် နတ်သမီး ”
ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကြောင့်နတ်သမီးက လူသားမိန်းမကို အထင်ကြီးသွားတယ် ပြီးတော့ ဘုရားသခင်ကိုထပ်မေးတယ်
“ ဒါဟာ လူသားမိန်းမရဲ့ပုံသဏ္ဍန် အပြည့်အစုံပဲလား ဘုရားသခင် ”
“ ဒီနေ့တော့ သူမကို ဖန်တီး၇တာတွေများနေပြီ မနက်ဖြန် တစ်ချက်ကြည့်ပါဦး အဲဒီအခါ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လူသားမိန်းမပုံစံကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ”
နောက်တစ်နေ့ကျတော့ နတ်သမီးက ဘုရားသခင်ဆီရောက်လာပြန်တယ် ဘုရားသခင်ကပြောတယ်
“ ဒီနေ့တော့ လူသားမိန်းမရဲ့ပုံစံဟာပြီးသင့်သလောက်တော့ပြီးနေပါပြီ ဖန်ဆင်းခဲ့ သမျှထဲမှာ လူသားမိန်းမကို ဖန်ဆင်းရတာ အနှစ်သက်ဆုံးပါပဲ ”
“ ဘာလို့ပါလဲ ဘုရားသခင် ” နတ်သမီးကမေးတယ်
“ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ဆို လူသားမိန်းမဟာ သူမ ဘာသာသူမ ပြုစုစောင့်ရှောက်တတ်တယ် သူတစ်ပါးနေမကောင်းရင်လည်း ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတတ်တယ် တစ်နေ့မှာ သူမဟာ ၁၈ နာရီလောက် အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ် ”
နတ်သမီးက ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကို နားထောင်ရင်း လူသားမိန်းမအနီးကို တိုးကပ်သွားတယ် ပြီးတော့ လူသားမိန်းမကို တို့ထိကြည့်လိုက်တယ်
“ နူးညံ့လိုက်တာ ”
“ ဟုတ်တယ် နူးညံတယ် ဒါပေမယ့် စိတ်ထားကိုတော့ သန်မာအောင်လို့ဖန်ဆင်းထားတယ် အခက်အခဲတွေ အတားအဆီးတွေကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်လည်း ဖန်ဆင်းထားတယ် ”
“ သူမက တွေးခေါ်တတ်လို့လား ”
“ တွေးတတ်ယုံတင်မကပါဘူး အကျိုးအကြောင်းဆီလျှော်အောင် စဉ်းစားနိုင်ပြီးညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းလည်းလုပ်တတ်သေးတယ် ”
နတ်သမီးက ဘုရားသခင်ဖန်တီးလက်စ လူသားမိန်းမ ပါးပြင်ကို လက်နဲ့ထိလိုက်တယ်
“ ဟင် ဒီမှာ အရည်တွေ စိမ့်ကျနေပါလား ဖန်ဆင်းထားတာများလို့များ လူသားမိန်းမမှာ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေတာလား ”
“ အဲဒါကို မျက်ရည်လို့ခေါ်တယ် နတ်သမီး ”
“ ဟင် .. ဘာအတွက်လဲ ”
“ သူမရဲ့ဘ၀မှာ တွေ့ကြုံလာရတဲ့ ကြေကွဲမှု ၀မ်းနည်းမှု အမုန်းတရားနဲ့ ချစ်ခြင်းတရားတွေ အထီးကျန်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေ ဂုဏ်ယူမှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေ စတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကို ဖော်ပြဖို့အတွက်ပါ ”
နတ်သမီးဟာ လူသားမိန်းမကို အရမ်းအထင်ကြီးသွားတယ် ပြီးတော့လူသားမိန်းမကိုပြောတယ်
“ သင်ဟာ သိပ်ကို ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လှတဲ့လူသားမိန်းမပါပဲ ဘုရားသခင် သင်ဟာအရာရာကို စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီး တွေးတွေးဆဆ စွမ်းဆောင်နိုင်တယ် အခု သင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ လူသားမိန်းမကလည်း ကမ္ဘာလောကကြီးအတွက် ထူးခြားပြီး မရှိမဖြစ် အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ” လို့ဆိုလိုက်တယ်
“ ဟုတ်တယ် လူသားမိန်းမက ကမ္ဘာကြီးအတွက် တကယ့်လိုအပ်မှုတစ်ခုပါ သူမမှာ လူသားယောက်ျားတွေ အံ့သြသွားစေမယ့် ခွန်အားနဲ့သတ္တိတွေရှိတယ် မိသားစုရဲ့ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေကိုလည်းဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိတယ် သူမကြောင့် ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ချစ်ခြင်းတရားတွေနဲ့အတွေးအခေါ်သစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ် နောက်ဆုံး သူမကြောက်ရွံ့နေတာတောင်မှ သူမမှာ ပြုံးပြနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ် ”
“ အဲ့လောက်တောင်ပဲလား ”
“ ဒါတင်မကသေးဘူး ငိုကြွေးရမယ့်ဒုက္ခတွေ ခါးဆီးခံရမယ့်အချိန်မှာ သူမ သီချင်းဆိုနိုင်တယ် ပျော်ရွှင်ရမယ်မောတဲ့အချိန်မှာလည်းသီချင်းဆိုတယ် ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေချိန်မှာလည်း သီချင်းဆိုတယ် ”
“ အိုး ... ”
“ သူမ မိသားစုအတွက် သူမယုံကြည်ရာကို ပြုလုပ်နိုင်သလို မိသားစုအတွက် သူမဟာ အဓိကဇာတ်ကောင်အဖြစ် ခံယူထားပြီး မိသားစု ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်အောင်မြင်အောင် သူမအပေါ်မူတည်နေတယ်လို့လည်းခံယူထားတယ် သူမရဲ့နှလုံးသားဟာ ပုံသဏ္ဍန်အမှန်မရှိဘူး ”
“ သူမရဲ့သားသမီးတွေ အောင်မြင်နေတာကြည်ပြီး ကြည်နူးမျက်ရည်တွေလည်းကျနေတတ်တယ် သားသမီးအတွက် ၀မ်းနည်းတာဖြစ်စေ ၀မ်းသာတာဖြစ်စေ မျက်ရည်ကျတတ်သေးတယ် တခါတခါ ပီတိအပြုံးနဲ့ဂုဏ်ယူနေတတ်သေးတယ် ”
နတ်သမီးက ဘုရားသခင်စကားနားထောင်ရင်း လူသားမိန်းမကို သဘောကျနေခဲ့တယ် ဘုရားသခင်က နောက်ထပ်ဆက်ရှင်းပြတယ်
“ သူမ နှလုံးသားဟာ ဆွေမျိုး မိသားစုထဲက တစ်ယောက်ယောက်ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ဆုံးတယ် သတင်းကြားရင် ကြေကွဲထိခိုက်တတ်တယ် ဒါပေမယ့်အဲဒီကြေကွဲမှုတွေကိုပဲ ဘ၀အတွက်လိုအပ်တဲ့ခွန်အားအဖြစ်ပြောင်းလဲယူနိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ် ”
“ သူတပါးအတွက် အနမ်းရယ် ယုယနွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံခြင်းတွေက အသည်းကွဲခြင်းကို ကုစားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလည်း သူမက သိသေးတယ် ”
ဘုရားသခင်က နောက်ဆုံးနတ်သမီးကို စကားတစ်ခွန်းပြောတယ်
“ ဒါပေမယ့် လူသားမိန်းမမှာ ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုရှိတယ် ”
“ ဘယ်လို .. ”
“ ဘယ်လိုချို့ယွင်းချက်လဲ ဒီလောက်ပြည့်စုံနေတာကို ”
“ သူမဟာ သူမရဲ့ အဲဒီလို တန်ဖိုးရှိနေမှုတွေကို မေ့နေတတ်တယ် ”
“ ဟင် .. ”
“ နောက်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ သူမဟာ အဖိုးတန်ဆုံးလူသားတစ်ယောက်ပါလားဆိုတာကိုလည်း အမြဲတမ်းမေ့နေတတ်တယ် ”
ပုံပြင်လေးရဲ့ ဆိုလိုရင်းက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အနှစ်သာရနဲ့ တန်ဖိုးရှိခြင်းကို ဖော်ကျူးသွားခြင်းပါပဲ
တချို့ အမျိုးသမီးဘ၀ရလို့ စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ပျက်တယ် တချို့ ချစ်သူရည်းစားက အသည်းခွဲသွားလို့ စိတ်လေနေတဲ့သူတွေ တချို့ ယောက်ျားကပစ်သွားလို့ လက်မှိုင်ချပြီးကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ထင်နေတဲ့သူတွေ အတွက်
ဒီပုံပြင်လေးက ခွန်အားတချို့ကိုပေးစေနိုင်မှာပါ ။
တကယ်တော့ ယောက်ျားဖြစ်စေ မိန်းမဖြစ်စေ သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူ ကမ္ဘာလောကကြီးကို အလှဆင်နေတဲ့လူသားတွေချည်းပါပဲ ။ မိန်းမမို့လို့ နိမ့်ကျတာမျိုးမရှိသလို ယောက်ျားမို့လို့ ထူးခြားပြီးမြင့်မြတ်နေတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူး ။ ပခုံးနှစ်ဖက်က ခေါင်းပေါက်တာခြင်းအတူတူ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ လူသားဆန်မှု အပြည့်အ၀ရှိနေသူဟာ လူသားပီသတာပါပဲ ။
အမျိုးသမီးတိုင်း မိမိ ရရှိနေတဲ့ဘ၀ကို တန်ဖိုးထားပြီး ဂုဏ်ယူနိုင်ကြပါစေ ။
The creatures of women အား ဆီလျှော်သလို ဘာသာပြန်သည်
Posted by သက်တန့်ချို at 11:08 AM 10 comments:
တစ်ခါတုန်းက ငါးနှစ်အရွယ် သားငယ်တစ်ယောက်နဲ့ မိခင်ဖြစ်သူတို့ဟာစကားပြောနေကြတယ် ။ မိခင်ဖြစ်သူက သားဖြစ်သူကိုပြောတယ် ။
“ သား မေမေတို့ မေမေတို့ ဟိုးအဝေးကြီးကို သွားလည်ကြတယ်ဆိုပါစို့ အဲဒီအချိန်မှာ နေကအရမ်းပူပြီး ရေကလည်းအရမ်းငတ်နေတဲ့အချိန်ရေဘူးကလည်းမပါဘူးဆိုပါစို့ .. ဒါပေမယ့် သားရဲ့လွယ်အိတ်လေးထဲမှာ ပန်းသီး နှစ်လုံးပါခဲ့မယ်ဆိုရင်သားဘာလုပ်မလဲ ”
သားဖြစ်သူကတခန ကြာလောက်စဉ်းစားပြီါ်ပြန်ဖြေတယ် ။ “ ပန်းသီး နှစ်လုံးစလုံးကို သားတစ်ကိုက်စီ ကိုက်ပစ်မယ် ” တဲ့ ..။
သားဖြစ်သူရဲ့အဖြေကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူက စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ် ။ မိခင်က သားဖြစ်သူကို အပြစ်တင်ပြီး ပန်းသီး နှစ်လုံးကို တစ်ယောက်တစ်လုံးစီ စားသင့်ကြောင်း ဆုံးမဖို့ စဉ်းစားတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ ရုတ်တရက်စိတ်ပြောင်းသွားပြီး သားဖြစ်သူကို ရင်ခွင်ထဲမှီစေပြီး ဦးခေါင်းကိုပွတ်သပ်လို့ စကားပြောတယ် ။ ဘာလို့သားကလေး က ဒီလိုစကားပြောရတာလဲ သူသိချင်နေမိတယ် ။
“ သား ..ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလို စဉ်းစားပြီးပြောရတယ်ဆိုတာ မေမေ့ကိုပြောပြပါလား ”
သားဖြစ်သူက မိခင်ကို မျက်လုံးလေး ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နဲ့ပြန်ဖြေရှာတယ် ။ “ ဟို ... သားက ပန်းသီးနှစ်လုံးလုံးကို တစ်ကိုက်စီကိုက်ကြည့်ပြီး အချိုဆုံး အလုံးကို မေမေ့ကို ပေးမလို့ပါ ”
မိခင်ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာ ၀မ်းသာတဲ့မျက်ရည်တွေ စီးဆင်းလာခဲ့ရတယ် ။
ယုံကြည်ပြီးခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ဆံလိုက်ခြင်းဟာ နှစ်သိမ့်ဖွယ်အဖြေကိုရစေပါတယ် ။ အကယ်၍ သာ တခြားမိဘတွေလို သားငယ်ကို ဆူပူပြီးဆုံးမလို့ကတော့ သားငယ်ဆီကနေ ဒီလိုရိုးသားတဲ့အဖြေကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ တစ်ဖက်လူရဲ့စကားကို ဆုံးအောင်ပြောခွင့်ပေးလိုက်တာဟာ အကောင်းဆုံးယုံကြည်ခွှင့်လွှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရိုးသားမှုကို ဖော်ထုတ်နိုင်စေပါတယ် ။
Thinking Concepts စာစုများထဲမှ A love to give MOM အား ဆီလျော်သလိုဘာသာပြန်သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 11:07 AM 1 comment: